शेरधनको साढे तीन वर्षमा सबैभन्दा चर्चित काम: तीन वटा हेलिकप्टर चार्टर गरी ससुराली यात्रा – Kavrepati
Home / समाचार / शेरधनको साढे तीन वर्षमा सबैभन्दा चर्चित काम: तीन वटा हेलिकप्टर चार्टर गरी ससुराली यात्रा
admin3weeks ago	समाचार Leaveacomment 93 Views
जनताले सम्झिरहने केही पनि काम नगरी प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई पदबाट बा’हिरिएका छन्। तीन वर्ष पाँच महिना सात दिन प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका राईले यस अवधिमा व्यक्तिगत जीवनमा भने ठूलै उपलब्धिमूलक काम गरे।
नवविवाहिता दुलही जाङमु शेर्पालाई साथमा लिएर मुख्यमन्त्री राई श्रीमतीको जन्मथलो संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको सेदुवा र नोर्बु पुगेका थिए, जहाँ मुख्यमन्त्री राईको भव्य स्वागत गरिएको थियो। उक्त भव्यताको तस्बिर शेरधन स्वयमले सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेका थिए।
त्यसपछि उनको ‘चर्चा’ घर–घर र जनजनमा चुलिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा यसबारे बहस भएको थियो। मुख्यमन्त्रीका रुपमा उनी प’दासीन भएपछिका साढे तीन वर्षमा उनको सबैभन्दा ‘चर्चा’ भएको काम यही थियो। जो उनको निजी जीवनमा सबैभन्दा प्रभाव राख्ने तर जनताको जीवनमा कुनै सरोकार नराख्ने र अनुकरण गर्न नहुने काम थियो।
२०७४ फागुन ३ मा मुख्यमन्त्री चुनिएका थिए– राई। एमालेका केन्द्रीय सचिव भीम आचार्यलाई संसदीय दलभित्रको गो’प्य मतदानमा दुई मतले हराएर उनी मुख्यमन्त्री भएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका माइती गाउँका जनप्रतिनिधि उनले ‘दिदी’को शक्ति देखाइदिएका थिए– एमाले पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालका दाजुकी छोरी बिहे गरेका ज्वाइँ भीम आचार्यलाई।
आचार्यलाई समर्थन गर्ने तत्कालीन माधव नेपाल गुटको बहुमत भएको प्रदेशमा दिदीको अदृश्य शक्तिको प’रिणाम देखाइदिएका थिए। साढे तीन वर्ष लामो कार्यकालमा उनले आफ्नो बिहेबाहेक केही पनि उल्लेखनीय कार्य गरेनन्। बरु प्रदेशसभाभित्र चु’नावमै एमालेका उच्च नेतालाई ह’राएका उनले केपी ओली समूहको प्र’भाव घ’टाए।
बर्खे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने घोषणा गरेका उनले नामकरणको प्रस्ताव नै पेस नगरी अधिवेशन अन्त्य गरे। एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँ’तिनुअघि राई नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त थियो। राईले चाहेको भए त्यतिबेला नै प्रदेशको राजधानीसँगै नामकरणको काम पनि टुंगो लगाउन सक्थे तर त्यसमा उनले पहल नै लिएनन्।
उनको केशजस्तै कुरा पनि सधैँ चि’प्लो देखियो। अनि काम गर्न सकेनन्। सं’घीयता कार्यान्वयनमा समेत उनले माखो नमारेको एमालेकै एक प्रदेशसभा सदस्यले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै बताए। राई आफ्नो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालयका कारण वि’वादित बने।
काठमाडौं र धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएर अनावश्यक खर्च गरेपछि मुख्यमन्त्री राईमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। करिब दुई वर्ष अघि स्थापना भएको कार्यालयको वार्षिक भाडा बापत प्रदेशको स्रोतबाट ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ तर सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्री राई वि’रलै मात्र पुग्छन्।
कार्यालय रुङ्नका लागि प्रदेश सरकारले एक जना कर्मचारी राखेको छ। मुख्यमन्त्री काठमाडौं जाँदा सहजताका लागि भन्दै एक जना सवारी चालकसमेत पनि राखिएको छ। संघीय काठमाडौंमा पनि मासिक साढे तीन लाख बढी शुल्क तिर्ने गरी आवास तथा सम्पर्क कार्यालयका लागि घर भाडामा लिएपछि राई विवादमा मात्रै ता’निएनन्, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रश्नसमेत उठाएको छ।
उनी मुख्यमन्त्री भएकै अवधिमा दोलखा घर भएको बताउँने युवती बा’लिका खड्काले मुख्यमन्त्री राईवि’रुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मु’द्दा दायर गरिन्– आफू राईको श्रीमती दा’बी गर्दै। त्यो ‘काण्ड’ले राई निक्कै त’नावमा परेका थिए। भलै यो काण्ड भने राईले जि’तेका छन्। शायद् यसैबीच विवाह भएकाले अब यस्तो आरोप उनले व्य’होर्नुपर्ने छैन।
मुख्यमन्त्री राईको आफ्नै स्ट्याटसले बताउँछ– उनको सफलता नै साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्रीकी कु’र्सीमा असीन हुनु हो। आ’त्ममूल्याङ्कन जनताले आफ्नो आयुको साढे तीन वर्ष व्यर्थ खे’र फालेका छन्। सुकिलो भएर सधैँ केशमा तेल लगाउने मुख्यमन्त्रीको च’म्किलो अनुहार र सफेदपोश पहिरन भने प्रदेशवासीका लागि अनुकरणीय हुने छ। बीएल नेपाली सेवा
Previous दाजु-भाईले दिदि-बहिनी नै विवाह गरेर घर ल्याए, रातको १ बजे जे भयो थाहा पाउँने जो कोही चकित !
Next मदर, फादर, ब्रदर भन्दा आधुनिक हुने, आमा भन्दा गवाँर हुने हुन्छ ?: अञ्जली अधिकारी